Xai Yak Techonology: 2012
ပန်းလေးလှတော့ လိပ်ပြာတွေ ဝဲတယ်တဲ့။ သိုးငယ်လေးလို ဖြူစင်ပြီး သမင်မျက်လုံးမှာ ဇင်ယော်တောင် မျက်ခုံးလေးနဲ့ ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူကလေးကို ချစ်မိသူထဲမှာ ကိုလဲ အပါအဝင်ပေါ့။ သူလေးမိဘတွေရဲ့ပြည့်စုံမှုကြောင့် တပါးသူတွေ ဆင်ကြံကြံ ဝံပုလွေချောင်း ချောင်းနေကြပေမယ့် ကိုကတော့ ရိုးသားစွာ ချစ်တာပါ။သူလေးရဲ့ စွန်ရဲလို စူးရှတဲ့ အကြည့်တွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် ကျရုံးခဲ့သူလေ။ ပေတစ်သီး ၊ ကျီးတစ်သား လို ပေါက်ဖွား လာတဲ့ ကို့ရဲ့အချစ်ပါ။ ကိုကတော့ ဥစ္စချော ရုပ်ပေါ ၊ ဘဲလိုအသံ ၊ ကျွဲလိုအသား ၊ ဇီးကွက်မျက်လုံး ၊ လိပ်ခါးနဲ့ ဖားဖင်ငါးပါးကြံအင်လက္ခဏာ ပြည့်စုံသူပါ။ ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ့လို တည်ကြည်ပြီး ကျားလို ရဲရင့်သူနော်။ ဘဝပေး အခြေအနေကြောင့် ကျီးကန်းနဲ့ ဗျိုင်း တုနှိုင်းလို့ မရနိုင်တာကြောင့် ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မဲမကြည့်ဝံ့ သ လိုတော့ ဖြစ်မိသား။ မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြတာမဟုတ်ပေမယ့် သူလေးသေချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက် ရင်တော့ ရှဥ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ဖြစ်မယ့် အဖြေလေးပေးပေါ့။ အဖြေမရမချင်း ဝက်အစာတောင်း သလို တကျီကျီ မအီမိအောင် ကျိုးစားထိန်းနိုင်ပေမယ့် ခွေးနေရာမရသလို နေမထိထိုင်မသာတော့ ဖြစ်နေရမှာပါ။
ညည အိမ်မက်ထဲမှာလေ… သူလေးနဲ့ကို လားကြီးစီးလို့ ကမ္ဘာအပြင်ဘက်ကို သွားကြတယ်တဲ့။ သူလေးအတိတ်မှာမှားခဲ့တာတွေရှိရင်တောင် ကို့ဘဝတစ်ခုလုံး နွားအဖြစ်ခံပြီး သားပိုက်ကောင်လို ကို့ရင်ခွင်ထဲမှာ သူလေးကို ထားပြီးကြောင်လေးကို ယုယသလို ယုယမှု လေးတွေ ပေးချင်တယ်ကွာ။ သူလေးရဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ တုန့်ပြန်လာမယ့်စာကလေးကို သစ်ကုလားအုပ်လို အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်နေ မယ်နော်။ ကိုမျှော်လင့်သလိုလေး ဖြစ်လာရင်တော့ငါးသလောက်ပြုံးလေး နဲ့ မြင်းတစ်ကောင်လို အပြေးလေး လာခဲ့မယ် သူလေးရယ်….
အချစ်ရယ် ဒီစာကိုရေးလိုက်လို့ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တယ်၊ မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြတယ်၊ ခရု ခါးတောင်းကျိုက်ဖမ်းတယ်လို့ မထင်စေချင်ဘူးနော်။ ကိုယ့်မှာ မင်းကိုချစ်မိမှပဲ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လိုလို၊ မပိုင်ဝက်မွေးဆိုသ လို လို၊အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်ဆိုသလိုလို ဖြစ်နေပါပြီ။
အခုအချိန်မှာ ၀က်ဖြစ်မှတော့ မစင်ကြောက်နေ လို့လည်း မထူးတော့ပါဘူးလေ။မင်းအဖေကို ပြောလိုက်ပါ မြင်းကမလှုပ် ခုံကလှုပ်၊ ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုး ဖြစ်မနေပါနဲ့လို့။ ယူမှာက မင်းကိုပါ။ ဘယ်နှယ့်သူကကဲကဲလှုပ်နေရ တာလဲလို့။
ကြက်တူရွေး က တော်တော် မယ်ဘော်က ကဲမနေပါနဲ့လို့။ မင်းအဖေက ကိုယ့်ကိုပြောတယ် ငကြောင် တဲ့။ မင်းဟာအလုပ်မရှိ ကြောင်ရေချိုးပေးနေတဲ့ ကောင်စားမျိုးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ပါ ကိုယ်ဟာ ကြောင် သူတော် ကြွက် သူခိုးမဟုတ်သလို တောမီးလောင်တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်တဲ့ ကောင်စားမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့။ ကိုယ့်ရဲ့ မဖြစ်စလောက်သာရတဲ့ လစာလေးဟာ ကြောင်အို ကြွက်မလေး ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့လေ …….နောက်ပြီးတော့ မင်းကို လာလာကြောင်နေတဲ့ သင်္ဘောသားဆိုတဲ့ အကောင်ကလည်း မင်းအဖေလို လူအတွက် ကြောင်ခံတွင်းပျက်နှင့် ဆက်ရက်တောင်ပံကျိုးလိုဟိုကောင့်အတွက်ကျတော့ ကံကောင်း တဲ့ကျား သွားရင်းသမင်တွေ့ဆိုသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။
သူများ အကြောင်း လည်းမပြောချင်ပါဘူးအချစ်ရယ် ဒီကောင့်မိဘက ချမ်းသာတော့ ကျားကြီး ခြေရာကြီး ၊ ရွှေပင်နားတော့ ရွှေကျေးမျိုးတော့ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ တကယ်တော့ သူ့မိဘတွေဟာ ဒီယုန်မြင်လို့ဒီ ချုံ ထွင်၊ ကြွက်သေ တစ်ခု အရင်းပြုရုံလေးနဲ့ စားရကံကြုံပြီးမုတ်ဆိတ်ပျားစွဲ၊ ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်ဖြစ်လို့၊ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးကာယုန်ထောင်ကြောင်မိ ဖြစ်သွားသူတွေပါ။ အများညီဤကိုကျွဲဖတ် ဆိုသလို လုပ်ချင် ရာလုပ်နေတဲ့ ပြောတော့ကြောင်သူတော် ယိုတော့ ကြွက်မွှေး ဆိုတာသူ့မိဘတွေပေါ့။ ဆင်သတ် အရပ်ဝေပြီးမှ ဆင်သားရေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ဖုံးချင်တာ သူတို့အသိုင်းအ၀ိုင်းပေါ့။ ကိုယ်အထင်အကြီးပါဘူး။ အထင်လည်း မသေးပါဘူးနော်။
ဒီကောင်ကတော့ ကျွဲကူးရေပါ ဆိုတဲ့အတိုင်းသူစီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်းတောင် မသိ၊ မိဘဆိုတာလည်း ကျီးဘုတ်ရိုသေ၊ ဘုတ်ကျီးရိုသေတဲ့ အဆင့်တောင်မရှိ၊ ခွေးကလေးအရောဝင် ပါးလျက်နားလျက်၊ ကျီးကန်းသူကောင်းမြှောက် ချေးကောက်စား ဆိုတဲ့သူမျိုးပါ။ ထားလိုက်ပါလေ။ ခွေးရူးကောင်းစား တစ်မွန်းတည့်ပါပဲ။ အချိန်တန်တော့နွားပိန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ မင်းသာအဲဒီအကောင်နဲ့ညားရင် ဆင်နားရွက်ကြွက်တပ်၊ ကြွက်နားရွက်ဝက်တပ် ပေးသလိုမျိုး ကို့ရိုးကားရား ဖြစ်နေမှာ။ မင်းအဖေကလည်းကြောက်ပါတယ်ဆို ကြောင်နဲ့တို့ ဆိုသလို မင်းမလိုချင်တာကိုပဲ စွတ်ပြီး ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကျော်ချင်နေတာ။ ကိုယ်ကတော့ မင်းမိဘနှစ်ပါးကြောင့် ကျွဲနှစ်ကောင်ကြားထဲက မြေစာပင်၊ ကျားချင်းကိုက်ရာ သမင်းလမ်းကူးမှား ဖြစ်မယ့် မင်းဖြစ်အင်ကိုသာတွေးတွေး ရင်မောပြီး ကြမ္မာဆောင်သားကောင်ဆိတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်ပါအချစ်ရယ် မင်းအဖေဟာ ငှက်တစ်ကောင် မြားတစ်စင်း၊ ရှဉ့်တစ်ကောင်မြားတစ်စင်း ဆိုတာ ကို မြင်ပုံမရဘူး။ကြောင်ရုပ်ဖြစ်စေ ကြွက်သေတာလိုရင်းဆိုပြီး စွတ်မိုက်နေတာ။
အင်း… မပြောချင် ပါဘူးလေ …ငါးတကာယိုသည့်ချေးပုဇွန်ဆိတ် ခေါင်းမှာစု လို့ပဲပြောပြော၊ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ် လို့ ပဲပြောပြော။ သူ့မိဘတွေကလည်းဒီကောင့်ကြောင့် နာမည်ပျက်နေတာကြာပါပြီ။ တကယ်တော့ အညှီရှိ ရာ ယင်အုံဆိုသလို မင်းအဖေဆီကို ဒီကောင်ဟာငါးပွက်ရာငါးစာချဖို့ ရောက်လာတာပါ။ ပြီးတော့ ဆင်ကောင်ကြီး အမြီးကျမှတစ်ဆိုသလို၊ ငါးစိမ်းမြင် ငါးကင်ပစ်လုပ်သွားဦးမှာ။ နောက်ဆုံးကျမှ ဒီကောင့်ကြောင့် လူတွင် ပါနွား ကျားကိုက်ဆိုတဲ့အချိန်၊ ကျားသေကို အသက်သွင်းလို့ စင်းစင်းသေပါပြီလို့ မင်းအဖေအော်နေ ဦးမှာ။ အဲလို ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်းသိတဲ့အချိန်မှာ ကျားရှေ့ မှောက်လျက်လဲ သလိုဖြစ်နေမယ့် မင်းအဖေ ရဲ့ ကိုယ့်ယောက္ခမလောင်းကြီးရဲ့ သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်းအဖြစ်ကို ကိုယ်မြင်ယောင်မိနေတယ်။
မင်းအမေကြီးကျတော့လည်း ဒီကောင်နဲ့ပေးစားချင်တိုင်း သမီးတစ်ကောင် နွားတစ်ထောင်ဆိုပြီး အရပ်ထဲမှာ လက်ပံပင်ဆက်ရက်ကျ သလို ပွက်ပွက်ညံနေပါရော။ တကယ်ကျတော့ ရှမ်းကြိုက်နွားချောဆိုတာ ကိုယ် ကတော့ မြွေမြွေခြင်းခြေမြင်ပြီးသားပါနော်။ အင်း… နွားအို မြက်နုကြိုက်သလို မင်းအဖေကြီးငွေကြိုက် တာလည်း နွားငတ်ရေချ ဆိုသလို၊ကိုယ့်အတွက်တော့ အထူး အဆန်း မ ဟုတ်တော့ပါဘူး။ မင်းအဖေက ဆင်သွားရင်လမ်းဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတာလေ။ငါးစာသာမြင် ငါးမျှားချိတ်မမြင် ဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါထက် သမီးချောလေးအရှိန်နဲ့ ဆင်ဖြူတော်မှီပြီး ကြံစုပ်၊မျောက်ပြဆန်တောင်း လုပ်နေတယ်လို့လည်း မပြောချင်ပါဘူး။ နွားပေါ့ အစွံထုတ်လို့ ပြောရင် မင်းပါ စိတ်ဆိုးတော့မယ်။
အင်း… ဆင်ဖြူ့မျက်နှာဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့ ဆိုသလို ကိုယ့်ရဲ့ မိဘ Background ကလည်း သူ့အတွက် ဆို နွားပျိုသန်လှ နွားအိုပေါင်ကျိုး သာသာပဲရှိတော့… အင်း… ယုန်အတွက်ချုံကကြောင့်ကြနေ ရတာပေါ့။ မင်းအဖေကပြောတာ။ ကိုယ့်ကို ခွေးမသား တဲ့။ ခွေးမြီးကောက်ကျည်တောက်စွပ်တဲ့။ မင်းကိုလည်း မွဲချင်တဲ့ခွေး ပြာပုံတိုးဆို။
ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပါ ကိုယ့်အခြေအနေကလည်း လူမလေး ခွေးမခန့်တဲ့ အပြင်၊ အရပ်က လည်း ခွေး ပစ်တဲ့တုတ်သာသာရှိတော့…ကိုယ်နဲ့ပေးစားမယ့်အစားခွေးအမြီးဖြတ်ပြီးသာ ပေးစားမယ်တဲ့။ အဲဒါကို ဟို အကောင်ကြား ရင်သူ့ကိုခွေးအမြီးပြတ်နဲ့ နှိုင်းတယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးဦးမယ်။ တကယ်ကျတော့ ကိုယ်ဟာ ခွေးရူး ဖက်ကိုက် ခွေးကောင်းနားရွက်ပြတ်ဖြစ်သွားမှာ ကြောက် တဲ့ခွေးဖြူတောမတိုးဝံ့တဲ့သူပါ။
ကဲပါ… ခွေးဟောင်လို့တောင်ပို့မပြေးနိုင်ပါဘူး။ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲပါအချစ်ရယ်။ တစ်ခုတော့မင်းအဖေကိုပြောချင်တယ်။ ဟောင်လွန်းသည့်ခွေး လူမလေးတတ်ဘူးဆိုတာကို။
ကျန်သေးတယ်….. မင်းအဖေကပဲပြောတာနော် ကိုယ်ဟာ တော်တော်နွားကျတဲ့ကောင်တဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်ရမလဲ၊ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားလိုငါ့စကားနွားရ မပြောတတ်ဘူး၊ နွားသိုးကြိုးပြတ် မရမ်းတတ်ဘူးလို့ နွားရှေ့ ထွန် ကျူးပြလိုက်တာပေါ့။
အချစ်ရယ် ကိုယ်ဒီစကားတွေပြောနေရတာ ကျားလိုက်မှ တုတ်ခုတ်၊ ဆင်လိုက်မှသစ်ပင်ရှာတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်မှာ ရှာသမျှ ပိုက်ဆံကလည်းသမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း ဆိုသလိုဖြစ်၊ ကံအကြောင်းက မသင့်လေတော့ မြွေပွေး ခါးပိုက်ပိုက်မိလျက်သားလည်းဖြစ်၊ ကျားချင်းကိုက်ရာ သမင်ကူမမှားဖို့အရေး၊ ပျားလည်းစွဲသာ ရှဥ့်လည်းလျှောက် သာ ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်း မြွေမသေ တုတ်မကျိုး Style မျိုးဖြစ်သွားတော့၊ ဖွတ်မရ ဓါးမဆုံး၊ ငါးမရ ရေချိုးပြန် ရုံ လေးပါ။
ကိုယ့်မှာတော့ကျားလည်းကြောက်ရ ကျားချေးလည်းကြောက်ရဆိုသလို မင်းမိဘကော၊ မင်းကိုပါ လန့်ပြီး ကျားရဲရာ ကြမ္မာ ရိုးသာဆိုသလိုဖြစ်နေရပါပြီလေ။ တကယ်တမ်းဆိုရင် ကိုယ်ဟာမြင်းကောင်း ခွာလိပ် လေး ပါကွယ်။ မင်းအဖေ ကလည်း ကိုယ်ကမင်းကိုချစ်ပါတယ်ပြောတိုင်း ကြိုးကြာဆို ဘာငှက်လဲ၊ ကျား ကိုက်ပါတယ်ဆို နာတာ ရှည်လား ချည်း လာလာမေးနေလေတယ်။ ဆင်ကောင်ကြီးတွေ့မှတော့ ဆင်ခြေရာ ရှာစရာ လိုတော့ မလားကွယ်။ ကိုယ်ကလည်း မင်းအဖေရှေ့မှာ ကျွဲပါးစောင်းတီး… အဲ…မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြတွေ ခဏခဏ မလုပ်ချင် ပါ ဘူးလေ။
လူပဲအချစ်ရယ်စင်းလုံးချောတော့ ဘယ်ပြည့်စုံမလဲ။ သိကြားမင်းတောင် ကျွဲယောင်ဆောင်တာ ဂျိုကားတယ် လို့ ပြောခံ ရသေး တာပဲ။ထားဗျာ။ ပုံလုံတစ်လှည့် ငါးပျံ တစ်လှည့် ဆို တဲ့နေ့ကျရင်တော့ သူသိမှာပါလေ။ ဒါမှမဟုတ်များ ယာ လည်း ညက်စေကြက်လည်းပန်းစေ လို့များ လုပ်နေသလားမသိဘူးလေ။ မပြောချင်ပါဘူး အချစ်ရယ် လင်းတလောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှနိုင်ပါတယ်။ နွားကြော့ဆိုလေ ချုံတိုးလေဆိုတာမျိုးကိုယ်မလုပ်တတ်ပါဘူး။ အလကားရတဲ့ သမက်… အဲ… နွား သွားဖြဲကြည့်မနေပါနဲ့လို့။ မကောင်းပါဘူးလေ။ နှံပြည်စုတ်အမြှောက်နဲ့ချိန်တတ်တဲ့ မင်းမိဘတွေကို လက်တုန့်မပြန်ချင်ပေမယ့်လည်း တခါ တခါကျရင် အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက်လုပ်ပြီး ကြွက်မနိုင် ကျီမီးရှို့ချင်ရှို့ပစ်မိတော့ မှာ။ ရော့…ပတ္တမြား ရော့ …နဂါး မှလုပ်တတ်တဲ့ မင်းမိဘတွေကို ဆင်လည်းဆင်အထွာနှင့် ပုရွက်ဆိတ်လည်း ပုရွက်ဆိတ်အထွာ နဲ့ပါလို့ ကြုံရင်ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ မိဘဆိုတာသားသမီးကို ဆင်စီးပြီး မြင်းရံစေချင်တာ ကို ကိုယ်သိပါ တယ်။ ဒီတော့ မျောက်သား စားချင် မျောက်မျက်နှာကြည့် ဆိုသလိုကိုယ်နာလည်ပေးရမှာပေါ့။
တကယ်ပါ အချစ်ရယ် ကိုယ့်ဘ၀ဟာ ရေတွင်းထဲက ဖားသူငယ်လို၊ ကိုယ့်အဖြစ်ဟာပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုးဆေးကြောင့်လေး ဆိုသလိုဖြစ်ရုံမက ကိုယ့်အသည်းနှလုံးတွေဟာ မင်းနဲ့ဝေးမှ ကျီးကန်းတောင်းမှောက်၊ ငါးရံ့ပြာ လူး၊ကြောင်မရှိကြွက်ထ ဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလောက်လှတဲ့ သမီးမျိုးကို မွေးထားတဲ့ မင်းအဖေ ကို ပြော လိုက်ပါ။
အိုင်တွေ့လို့မှမလူးကျွဲရူး၊ ငါးကြော်မကြိုက် ကြောင်မိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့။ ဘာပဲပြောပြောပါ။ မင်းမရှိတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ဟာ နွားကွဲ ကျားကိုက် ဆိုသလိုဖြစ်လို့၊ မင်းဆီက ကိုယ်မျှော်နေတဲ့ အချစ်တွေကလည်း ကျားသနား မှ နွားချမ်းသာရမဲ့ ဘ၀မျိုးဖြစ်နေပါပြီ။ ယုံပါ၊ ကိုယ်ဟာ မျက်နှာမများတတ်သလိုလယ်ထွန်သွား နွားမေ့ လူစား မျိုးလည်း မဟုတ် တာအမှန်ပါ အချစ်ရယ်။တကယ်ပါအချစ်ရယ်… ကိုယ့်ရင်ထဲက အချစ်တွေဟာ မင်းတုန့်ပြန်မှ စူဠလိပ်ရေ ထဲ လွှတ်သလိုမျိုး စိုင်ကော်လို့ချုံပေါ်ရောက်ပြီး ရွှေပင်မှာနားတဲ့ရွှေကျေးလေး ဖြစ်တော့မှာပါ။
ချစ်သူ . . . .ငါမင်းကိုချစ်တာ မာသာထရီဇာ လို မာယာပလီပလာ တွေမပါ ပါဘူး . . .မယုံရင်ကျန်ကျောင်း လို မှန်ပြောင်းသုံးပီး ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ (နှလုံးသားထဲကိုပါ)မင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေများထဲ ဂျူလိယက်ဆီဇာ လို အလုအယက်ဆီးပါ လို့မပြောပါနဲ့ပါးကြီးမှာမွေးလို့ မာနကြီးတက်လို့ပါ။တကယ်ဆိုငါဟာမင်းကို ဘင်လာဒင်လာ ဒင်လို ကြင်နာခြင်တဲ့သူပါ ရယ် ။မင်းဘေးမှာ အမြဲတမ်း ဒိုင်ယာနာ လို ထိုင်ကာသာ နေလိုက်ခြင်ပါရဲ့ . . .အဲ့ဒီအခါကြရင် ဂျော့ဘွတ်(ရ်) လို လောကွတ်လေးလိုတော့လုပ်ပါ . .အာရာဖတ်လို ဘာလာကတ်နေတာလဲ လို့ အော်မထုတ်လိုက်ပါနဲ့နော် . ..စိတ်ကြီးတဲ့နေရာမှာ ထိပ်သီးမိုလို့ပါ။
မဟုတ်ရင် ပေါင်ချိန်ကို ဗြောင်လိန်တာထက် ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ ငါဟာအိုဝင် လို အပျိုမြင်တိုင်းငမ်းနေသူ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။မင်းကိုရမယ်ဆိုရင်လေ ကောလင်းပါဝလ် လို တောတွင်းတောင်ထဲမှာနေပြီးထယ်စောက်လို လယ်ပေါက်ကျွေးဆိုလဲ ကျွေးပါမယ်။မင်းအတွက် Prado ၀ယ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ ဆရာခိုတော့ဝယ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ် ။ကွန်ဒိုမှာမထားနိုင်ပေမဲ့ သွန်ဆိုသွန်ထားနိုင်ပါတယ်။(ရေအိုး)မင်းကသာ ထွာဝူချန်း လို သွားယူစမ်းဆိုရင်လေ ကိုရွှေထူးလို မြေတွေတူးလို့နိုက်ရဲပါတယ် ။ (လိပ်ဥ)ဒါတွေကို ဆန်ဖရန်စကို လို အကြံအဖန်တွေပိုတယ်လို့မထင်ပါနဲ့နော်။လန်ဒန် လို အမှန်အကန်ပဲဆိုတာ ယုံကြည်ပြီး နီကိုရဲ လိုဒီလိုပဲလို့ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ပါနဲ့တော့။ကိုယ့်အချစ်တွေကို ဘက်ခမ်း လို လက်ကမ်းပြီး ကြိုလင့်ပါတော့ကွယ် . . ဟီး မေးထဲရောက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တယ် ချစ်သူကို ရည်းစားစာရေးပြီး ပေးတတ်အောင်လို့
Posted by Xai Yak at 12:10 No comments:
Update Proxy 16-8-2012
Posted by Xai Yak at 13:59 No comments: